Sababaa Vaayirasii Koronaatiin Qabatanii Baqattoota fi Kanneen Dahata Barbaadan Hidhuun Hammaate, Jedha UNHCR
Biyyoonni baay’een weerara vaayirasii Koronaa sababaa godhachuudhaan baqattootaa fi namoota dahata siyaasaa gaafatan yeroo dheeraadhaaf hidhanii kaa’u. Jaarmayaan dhimma baqattootaa, ka Tokkummaa Mootummootaa akka jedhutti, baqattoonni waraanaa fi hiraarsa dheessanii baqatu. Yakkamtoota miti. Kanaaf, deemsa seeraa tii ala hidhamanii kaa’amuu hin qaban.
“Baqattoonnii fi namootni dahata siyaasaa gaafatan yeroo baay’ee bakka namni itti heddummaatee fi qulqullina hin qabne keessa akka jiraatan dirqsiisamu,” jedha, jaarmayichi Tokkummaa Mootummootaa – UNHCR. Giddu gala hidhaa akkasii keessatti addaan fagaachuun hin danda’amu. Tajaajila fayyaa fi bishaan qulqulluu argachuufis hireen jiru xiqqaa dha.
Dubbi-himaan UNHCR – Chaarlii Yaaksilii, ibsa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin, dhukkubichi hamaan COVID 19 waaltaalee akkasii keessaa tokko keessatti yoo ka’e balaan isaa hamaa tahuu fi fayyaa uumata achi keessaa jiruu mancaasuu akka danda’u dubbatan.
UNHCR akka jedhutti, seeraa ala baqattoota hidhuun biyyoota walitti-bu’insi keessa jiru kanneen akka Liibiyaa keessatti qofa ka murtaa’e miti. Biyyoota ardiilee Awurooppaa, Afrikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa keessattillee akka sirna hojii mootummaatti itti fayyadaman.
ABO, KFO fi PBOn Hoogganoonni, Misoonsonnii fi Deggertoonni Isaanii Hedduun Ka Jalaa Hidhaman Tahuu Himatan
Talaalliin COVID-19 Lama Nama Irratti Yaalamuuf Sadarkaa Dhumaa Irra Jira
Ambaasaadderri Ameerikaa Kan Zimbaabwee Keessatti Jeeqamni Akka Uumamu Yaalii Godhu Jechuun Himatte Zimbaabween
Zimbaabween Ambaasaadderri Ameerikaa Kan Zimbaabwee 'Jeeqamni Akka Uumamu Yaalii Godhu,' Jechuun Himatte
Paartiin Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen fi Paartiin Badhaadhina Naannoo Somaalee Nageenya Naannoof Wal Taanee Hojjenna Jedhan